Category: kooxda 0
Goorma ayaa dib loo bilaabayaa ciyaaraha ka dib marka laga saaro xameetida? Jimicsi aad u daran ama jimicsi isboorti laguma talinayo 15 maalmood ka dib qaliinka. Soo kabashada waa inay noqotaa ...
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha 5 sano ka dib joojinta? Dib-u-soo-kabashada dhaqdhaqaaqa isboorti waa inay si tartiib tartiib ah u ahaato: waa lagama maarmaan in lagu bilaabo dhaqdhaqaaqyo dabacsan (baaskiil, socod), ku saabsan…
Sidee dib loogu bilaabi karaa ciyaaraha adiga oo aan waxyeello u geysan naftaada? In la sameeyo go'aamo wanaagsan iyo dib u bilaabista dhaqdhaqaaqa ciyaaraha waa shay wanaagsan. Laakin in la sii wado xawliga waa...
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha bil ka dib? Kala duwi jimicsigaaga. Haddii aad tagto jimicsiga 3 jeer usbuucii, tusaale ahaan,…
Sidee dib loo bilaabo ciyaaraha? Dib u bilaabista nashaadaadka isboorti waa inay noqotaa mid horumarsan: waa lagama maarmaan in lagu bilaabo dhaqdhaqaaqyo jilicsan (baaskiil, socod), qiyaastii 3 saacadood halkii…
Sidee loo sameeyaa soo kabashada ciyaaraha wanaagsan? Dayactirka jirka waxaad si fiican u samayn kartaa fadhiyo yaryar oo 15 daqiiqo ah maalin kasta. Haddii aad…
Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha ka dib muddo dheer oo jimicsi la'aan ah? Halkan waxaa ah toban talooyin oo ku hagaya. Is weydii su'aalaha saxda ah ka hor inta aanad bilaabin. … Samee…
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha 1 bil kadib? Tusaale ahaan, haddii aad tahay ciyaartoy kubbadda cagta ah, iska ilaali inaad si toos ah ugu bilowdo ciyaarta (xoojinta), abaabul dhawr fadhi oo tababar ah…
Sidee looga fogaadaa xanuunka ka dib isboortiga?
Sideen loo dareemin xanuunka ka dib isboortiga? 7 tabo si aad isaga ilaaliso xanuunada ka dib ciyaaraha Kuleyl ka hor tababarka. … Duug murqahaaga, ka hor iyo ka dib…
Sidee loo joojiyo xanuunka ka dib jimicsiga?
Sidee looga fogaadaa xanuunka ka dib isboortiga? 7 tabo si aad isaga ilaaliso xanuunada ka dib ciyaaraha Kuleyl ka hor tababarka. … Duug murqahaaga, ka hor...
Su'aasha inta badan la isweydiiyo: Yaa ku guuleystay rugby?
Sidee looga qeyb galayaa Champions League?
Jawaabta ugu fiican: Sida loo galo xarunta tababarka rugby?
Sidee loo noqdaa kubad sameeye fiican?
Su'aasha inta badan la isweydiiyo: Sidee dib loogu eegayaa ciyaarihii hore ee kubbadda cagta?
Sidee buu u shaqeeyaa Qiimaynta Ciyaarta Ciyaarta Hockey?
Sideen loo korin bowdada marka la ciyaarayo ciyaaraha?